Iindaba - Iindaba eziHlangayo: 2021 Ingxowa yentsimbi oluthambileyo Ingxelo yeMakethi yoFakelo, Abadlali abaPhambili, Iindidi, Izicelo, amazwe, Ubungakanani beMarike, Uqikelelo ku-2027 (Ngokusekwe kuLwandiso lweHlabathi lwe-COVID-19 ngo-2021) | IViking Group Inc, iAnvil International, iMueller Industries, Inc.
Iindaba eziNomdla: 2021 Ingxowa yentsimbi oluthambileyo Ingxelo yeMakethi yoFakelo, Abadlali abaphambili, Iindidi, Izicelo, amazwe, Ubungakanani beMarike, Uqikelelo ku-2027 (Ngokusekwe kuLwandiso lweHlabathi lwe-COVID-19 ngo-2021) | IViking Group Inc, iAnvil International, iMueller Industries, Inc.
I-Los Angeles, e-USA: Ingxelo yeHive isandula ukukhupha ingxelo yophando enesihloko esithi "I-Pipe yentsimbi ye-Iron Pipe efanelekileyo ifaka phakathi i-2021 Market. Le ngxelo ibhalwe ngabahlalutyi abanamava nabanolwazi kubathengi. Kukudityaniswa okumangalisayo kwezifundo ezibalulekileyo ezijonga imeko-bume yokhuphiswano, ukwahlulwahlulwa komhlaba, kunye nengeniso, imveliso kunye nokukhula kokusetyenziswa kwemarike yokulinganisa imibhobho yentsimbi yehlabathi. Abadlali banokusebenzisa iinyani ezichanekileyo zentengiso, idatha kunye nophando lweenkcukacha-manani olunikezwe kwingxelo ukuqonda ukukhula okukhoyo ngoku nakwixesha elizayo kwintengiso yentsimbi yombhobho yentsimbi.
Abadlali abaphambili abaziswe kule ngxelo babandakanya: Iqela leViking, iAnvil International, iMueller Industries, iSmith-Cooper International, iMatco-Norca, iWard Manufacturing LLC, i-CCTF, umzi-mveliso weBIS ofanelekileyo, inkonzo yentsimbi, uGeorg Fischer, iQela leQela le-Hebei Jianzhi.
Ingxelo yentsimbi oluthambileyo yentsimbi olingeneyo inika ulwazi olubalulekileyo olunokunceda iingcali zeshishini, abaphathi bemveliso, iiCEO kunye nabaphathi beshishini kwimigaqo-nkqubo eyahlukeneyo, kubandakanya ukwanda, ukufunyanwa kunye nokwaziswa kwemveliso entsha, kunye nokuhlalutya nokuqonda imeko zentengiso.
"Ingxelo yeMarike yoLungiso lweNsimbi oluthambileyo lweHlabathi" ichaze ithemba kunye nethemba lekamva loshishino. Ingxelo yentengiso yentsimbi oluthambileyo yentsimbi ifaka imixholo eyahlukeneyo enje ngobungakanani bemakethi kunye nokwabelana, iintlobo zemveliso, izicelo, abaqhubi beemarike eziphambili kunye nezithintelo, imiceli mngeni, amathuba okukhula, abadlali abaphambili, kunye nomhlaba okhuphisanayo.
Indawo yokukhuphisana yeyona nto iphambili ekufuneka bayazi bonke abathathi-nxaxheba. Ingxelo icacisile ukhuphiswano kwimarike yentsimbi yokufaka umbhobho oluthambileyo ukuze uqonde ukhuphiswano ekhaya nakumazwe aphesheya. Iingcali zeMarike zikwaqwalasele imiba ephambili enje ngemisebenzi, imveliso kunye nokuxutywa kwemveliso, kwaye yanikezela ngesishwankathelo somdlali ngamnye ophambili kwimakethi yokulinganisa imibhobho yentsimbi yehlabathi. Ukongeza, iinkampani ezikule ngxelo ziyafundwa ngokusekwe kwizinto eziphambili ezinje ngobungakanani benkampani, isabelo sentengiso, ukukhula kweemarike, ingeniso, imveliso kunye nenzuzo.
Qaphela: Ngenxa yalo bhubhani, siye sazisa ngokuthe ngqo ifuthe le-COVID 19 kwimarike yentsimbi yombhobho oluthambileyo, eya kuthi ichaze ukuba i-Covid-19 iyichaphazela njani imboni efanelekileyo yokufaka umbhobho wentsimbi, imeko yentengiso kunye namathuba anokubakho. Ipateni ye-COVID-19, iindaba ezihamba phambili: Ifuthe le-Covid-19 kwiindawo eziphambili kunye neengcebiso zabadlali bombhobho zentsimbi zokujongana nefuthe leCovid-19.
Iingcali zethu zokuhlola zichonge ngokucacileyo imiba ebalulekileyo yengxelo yemarike yokulinganisa izixhobo zentsimbi. Ikwaqhube novavanyo olunzulu lophuhliso lwexesha elizayo ngokusekwe kwidatha edlulileyo nakwimo yangoku yentengiso yentsimbi yentsimbi oluthambileyo. Kule ngxelo yokulinganisa umbhobho zentsimbi oluthambileyo, siphande imigaqo, abathathi-nxaxheba kwimarike, iingingqi zejoloji, iintlobo zeemveliso kunye nokuphelisa ukusetyenziswa kwabathengi kwimarike. Ingxelo nokufakwa intsimbi oluthambileyo jikelele iqulethe data engundoqo kunye abangabancedani, kuboniswe ngohlobo imilo pie-ezimilise, oluthambileyo iintsimbi izixhobo iitafile, imizobo uhlalutyo kunye nemizobo reference. Ingxelo efanelekileyo yombhobho wesinyithi olungeleleneyo ithiwe thaca ngendlela eyiyo, ibandakanya iilwimi ezisisiseko, isiseko esifanelekileyo sombhobho wesinyithi esifanelekileyo, isivumelwano kunye nenyani ethile esekwe kwintuthuzelo kunye nokuqonda.
* Iiprofayili zeenkampani eziphambili. Ulwazi oluphambili lweshishini kunye nomncintiswano * Uhlalutyo lwe-SWOT kunye nohlalutyo lwePESTEL * Imveliso, ukuthengisa, ingeniso, ixabiso kunye nomda opheleleyo
Ukufakwa kwengingqi: Intshona Melika (United States, Canada neMexico), iYurophu (eJamani, France, United Kingdom, Russia nase-Italiya), Asia Pacific (China, Japan, Korea, India kunye ne-mpuma ye-Asia), Umzantsi Melika (Brazil, Argentina, EColombia, njl.njl., KuMbindi Mpuma naseAfrika (eSaudi Arabia, e-UAE, e-Egypt, eNigeria nase Mzantsi Afrika)
✔ Le ngxelo ibonelela ngengqondo kwintengiso kwaye iya kukunceda ukukhuthaza ishishini lenkampani kunye nemisebenzi yokuthengisa.
Fumana ingxelo "egqibeleleyo" okanye naziphi na izaphulelo (ezikhuselweyo nge-imeyile) @ https://www.reporthive.com/request_customization/2330748
Isishwankathelo seMarike: Eli yinxalenye yokuqala yengxelo, echaza uluhlu lwemveliso enikezelwa yimarike yokulinganisa izixhobo zentsimbi ezinobungakanani, ukwahlulahlulwa kwayo yimveliso kunye nokusetyenziswa kwayo, kunye nobungakanani bemakethi.
Ukhuphiswano lwentengiso lwabathathi-nxaxheba: Apha, ingxelo ibonisa ukuba ukhuphiswano kwimarike yentsimbi engenakuthanani neentsimbi inyuke okanye yehla ngokusekwe kuhlalutyo olunzulu lokuxinana kwemakethi, imeko yokhuphiswano kunye neendlela, ukwanda, ukuthengiselana kweM & A, kunye nezinye izihloko. Ikwabonisa ukukhula kweenkampani ezahlukeneyo kurhwebo lwezixhobo zombhobho zentsimbi oluthambileyo ngokumalunga nengeniso, imveliso, ukuthengisa kunye nesabelo sentengiso.
Iprofayile yenkampani kunye nedatha yokuthengisa: Eli candelo lengxelo libaluleke kakhulu kuba libonelela ngeenkcukacha-manani kunye nezinye iintlobo zohlalutyo kubavelisi abakhokelayo kwimarike yokulinganisa imibhobho yentsimbi. Ivavanya umthathi-nxaxheba ngamnye ofundwe kwingxelo esekwe kwishishini eliphambili, umyinge wenzuzo, ingeniso, ukuthengisa, amaxabiso, abakhuphisana nabo, isiseko semveliso, iinkcukacha zemveliso, usetyenziso lwemveliso kunye nodidi lwemveliso.
Inqanaba lentengiso kunye nethemba ngommandla: Le ngxelo ifunda ubume kunye nethemba leemarike zommandla ezahlukeneyo, ezinjengeYurophu, uMntla Melika, iMEA, iAsia Pacific kunye noMzantsi Merika. Zonke iimarike zengingqi ezifundwe kwingxelo zijongwa ngokusekwe kwixabiso, umda opheleleyo, ingeniso, imveliso kunye nentengiso. Ubungakanani kunye ne-CAGR yeemarike zengingqi nazo zibonelelwe apha.
Ukwahlulwa kweemarike ngemveliso: Eli candelo lihlalutya ngocoselelo onke amacandelo emveliso yentengiso yentsimbi oluthambileyo.
Kwimakethi yesicelo: Apha, iinkalo ezahlukeneyo zesicelo semakethi yokulinganisa izixhobo zentsimbi ziya kusetyenziswa kuphando.
Uqikelelo lweNtengiso: Qala kuqikelelo lwengeniso, emva koko uye kulungelelwaniso lombhobho weentsimbi oluthambileyo weentengiso zentengiso, izinga lokukhula kwentengiso kunye noqikelelo lokukhula kwengeniso. Uqikelelo lukwathathela ingqalelo imveliso, ukusetyenziswa kunye nezahlulo zengingqi zorhwebo olulinganisiweyo lwentengiso yentsimbi oluthambileyo.
Izixhobo ezingasentla zempahla eluhlaza: Eli candelo libandakanya uhlalutyo lwamashishini, uhlalutyo lolwakhiwo lweendleko, kunye nohlalutyo lwezinto eziphambili zorhwebo.
Uhlalutyo lwesicwangciso-qhinga sentengiso, abasasazi: Apha, olu phando lubonisa nzulu abathengi, indlela yokuziphatha yabasasazi kunye nezinye izinto, inkqubela phambili yeendlela zentengiso, kunye neendlela zentengiso ezinje ngentengiso engathanga ngqo kunye nentengiso ethe ngqo.
Iziphumo zophando kunye neziphetho: Eli candelo lixoxa ngokukodwa ngeziphetho kunye nezigqibo zophando olwenziweyo lwemibhobho yentsimbi oluthambileyo.
Isihlomelo: Le yinxalenye yokugqibela yengxelo, egxile kumthombo wedatha, okt. Imithombo yaseprayimari neyesekondari, ukwahlulwa kwemakethi kunye noonxantathu beenkcukacha, uqikelelo lobungakanani bemakethi, isicwangciso sophando kunye noyilo, iindlela zophando kunye neendlela, kunye nesipapasho somshicileli.
Oluthambileyo kwesinyithi umbhobho izixhobo izixhobo, intsimbi oluthambileyo umbhobho izixhobo intsimbi oluthambileyo ukukhula imibhobho efanelekileyo ukukhula kwimarike
Kutheni usenza ingxelo ngophando lwendlu? Xela uHive Uphando lubonelela ngophando lobuchule lweengxelo zorhwebo, uphando lweenkcukacha-manani, uhlalutyo lwamashishini kunye nedatha yokuqikelela kwiimveliso kunye neenkonzo, iimarike neenkampani. Abathengi bethu baquka iinkokheli zeshishini jikelele, imibutho karhulumente, ii-SME, abantu kunye nokuqala, iinkampani zabaphathi abaphezulu, iiyunivesithi, njalo njalo. Sinamathala eencwadi angaphezu kwama-700,000 e-United States, eYurophu, eMiddle East, Afrika nase-Asia Ingingqi yePacific egubungela i-IT, unxibelelwano ngocingo, iisemiconductors, ikhemistri, ukhathalelo lwempilo, amayeza, amandla kunye namandla, imveliso, iimoto kunye nezothutho, ukutya neziselo kunye namanye amashishini. Inani elikhulu leengxelo ezinengqiqo zinokunceda abathengi ukuba bagcine indawo yabo ekhokelayo kunye nokhuphiswano. Sibonelela ngoncedo ekuthathweni kwezigqibo kwishishini ngokwesicwangciso sokungena kwimakethi, ubungakanani bemakethi, uhlalutyo lwezabelo kwimarike, ukuthengisa kunye nengeniso, iindlela zetekhnoloji, uhlalutyo lokhuphiswano, imveliso yemveliso kunye nohlalutyo lwesicelo.
Xela uHive Uphando lubonelela ngophando lobuchule lweengxelo zorhwebo, uphando lweenkcukacha-manani, uhlalutyo lwamashishini kunye nedatha yokuqikelela kwiimveliso kunye neenkonzo, iimarike neenkampani. Sinceda izigqibo zeshishini kwisicwangciso sokungena kwimakethi, ubungakanani bemakethi, uhlalutyo lwezabelo kwimarike, ukuthengisa kunye nengeniso, iindlela zetekhnoloji, uhlalutyo lokhuphiswano, ukuxuba imveliso kunye nohlalutyo lwesicelo, njl.
Iingxelo zethu ezingaphezu kwama-600,000 zamathala eencwadi zijolise kwiimarike ezikhulayo ezikhulayo eUnited States, eYurophu, eMbindi Mpuma, eAfrika, nakwingingqi yeAsia-Pacific, egubungela i-IT, ezonxibelelwano, iisemiconductors, ikhemistri, ukhathalelo lwempilo, amayeza, amandla kunye namandla, imveliso , iimoto kunye nezothutho, amashishini okutya kunye namayeza, iziselo, njl.
Ukudibanisa uMbhobho womoya, Imibhobho Stainless Stainless, Iingono zensimbi ezingenanto, Iingono Stainless kunye neZilinganisi, Air Hose Coupling Europen Uhlobo, Coupling yomoya,